Enamel Pin Manufacturers Custom Mere HK Global GEO ogige Logo Lapel Pin
Azụ azụ: ewepụghị azụ na ntụtụ nchekwa
Usoro usoro: ịkpụzi, na-anwụ-mgbatị, polishing, adụ enamel, plating, QC, nkwakọ ngwaahịa.
Ọrụ nkwụsị otu:
Anyị nwere ike imepụta ihe eserese maka gị dịka ịgbaso faịlụ ndị a: JPG, PNG, PDF, AI, CDR, PSD, wdg.
3. kedu maka ego?
Ahịa dị n'okpuru atụmatụ dị iche iche, QTY na nkà. Anyị ga-aguputa gị ozugbo ị nabatara ajụjụ ahụ.
Production oge na-adabere na iji ukwu na dị iche iche nkà ịrụ.
Nọmalị, ọ bụ gburugburu 10 ụbọchị maka sample prodcution mgbe art mma mma; 15-20 ụbọchị maka nnukwu mmepụta.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na ngwaahịa ndị ị nwetara, biko, nweere onwe gị ịgwa anyị, ọrụ ire ahịa anyị ga-eme nke ọma iji dozie ya maka gị.
Ọzọkwa, anyị nwekwara ike ịme Iwu Nkwado Azụmaahịa na Alibaba, ka usoro ọ bụla wee nwee ike ịnọ na nchedo Alibaba, nke na-enye nchebe nke akụkụ abụọ.
Anyị nwere ike ịnabata T / T, PayPal, WU, MG, wdg. 50% nkwụnye ego iji malite iwu, 50% itule nwere ike gwụchaa tupu mbupu. Enwere ike ịmekọrịta ihe ọ bụla ọzọ chọrọ maka usoro ịkwụ ụgwọ.
Nke gara aga: Omenala Enamel Pin Maker Mara mma Mara mma Yellow Flower na Green Leaf Soft Enamel Pin
Osote: Hard Enamel Pin Custom Design maka Akwụkwọ
Ngwongwo Canada Lapel
Ngwunye Lapel Cool
Enamel Lapel mkpọ
Ahịa Pin Pin
Sailor Moon Enamel mkpọ
Omenala Enamel Pin Zinc Alloy Mere Nickel Platin ...
Omenala Design Factory Mere agba ọsọ Badge Gold P ...